काठमाडौं वल्र्ड स्कुल : आलिशान भवनमा विश्वस्तरीय शिक्षा (भिडियोसहित) | नेपाल आज
आइतबार, २४ असार २०७५ गते मा प्रकाशित
काठमाडौं । गुणस्तर शिक्षाले नै विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्छ । व्यावहारिक शिक्षा अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
नयाँ शैक्षिक वर्षको सुरुवातसँगै प्रायः अभिभावकहरू सन्तानको शिक्षाको विषयलाई लिएर चिन्तित हुने गर्छन् । नेपालमा महँगा स्कुलहरू भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने स्कुल भने नगण्य मात्रामा छन् । गुणस्तरको नाममा सैद्धान्तिक ज्ञानलाई मात्र जोड दिनाले विद्यार्थीको सिकाइ पूर्ण हुन सक्दैन । त्यसैले अभिभावकहरू राम्रो शिक्षा कै लागि सन्तानलाई विदेश पठाउन बाध्य छन् ।
तर, अब नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने स्कुलको स्थापना भइसकेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि काठमाडौं वल्र्ड स्कुल सञ्चालनमा आएपश्चात् यो समस्याको अन्त्य भएको अभिभावकहरू बताउँछन् ।
कहाँ छ यो स्कुल ?
काठमाडौं वल्र्ड स्कुल भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–७ गुण्डुमा छ । यो स्कुल केन्द्रीय सचिवालयभन्दा अर्थात् राजधानीको सिंहदरवारबाट पूर्व दिशामा मात्र १२ किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ । स्कुलले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमअनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्म आधारभूत र माध्यमिक स्तरको शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रमअन्तर्गत २०१९ देखि ‘ए’ लेभलको अध्ययन, अध्यापन गराउने छ । स्कुलले प्लस टु लेभलमा विज्ञान र व्यवस्थापन संकायको कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । आउने वर्षमा भने मानविकीको कक्षापनि सञ्चालन गरिने विद्यालयका सिइओ डा. राजेन्द्रकुमार घिसिङ बताउँछन् ।
चौधरी ग्रुप र विविध शिक्षाप्रेमी एवं शिक्षाविद्हरू तत्वावधानमा खोलिएको स्कुलमा निकट भविष्यमै स्नातक र स्नातकोत्तरको कक्षापनि सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।
सिइओ डा. राजेन्द्रकुमार घिसिङ
अध्ययनका लागि काठमाडौं वल्र्ड स्कुल नै किन ?
विद्यार्थीहरूको लक्ष्य र स्वभावको निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण आधार वातावरण हो । अध्ययन गर्न र सकारात्मक सोचको विकास गर्नका लागि सर्वप्रथम त शान्त वातावरण चाहिन्छ । यदि वातावरण स्वच्छ भएन भने प्रभावकारी अध्ययनमा वाधा पर्न सक्छ । सहरमा रहेका धेरै स्कुलका विद्यार्थी र शिक्षकहरू धुलो र धुवाँ ग्रस्त छन् । तर, काठमाडौं वल्र्ड स्कुलभने सहरको धुलो, धुवाँ र ध्वनि प्रदूषणबाट बिलकुलै टाढा छ । चारैतिर हरियाली जंगल, सुन्दर बगैँचा र स्वच्छ वातावरणमा अवस्थित यस स्कुलको संरचनाले जो कोहीलाई आकर्षित गर्छ ।
विशेषगरी शिक्षणकै लागि भनेर स्कुलको संरचना निर्माण गरिएको बताउँछन् सिइओ डा. घिसिङ । उनका अनुसार स्कुलको संरचना निर्माण गर्नुभन्दा अघि सिंगापुर, भारतलगायत धेरै अन्तर्राष्ट्रिय स्कुलहरूको भ्रमण गरी संरचनाको डिजाइन गरिएको थियो । ‘लामो समयको अध्ययन र अनुसन्धानको प्रयासपश्चात् स्कुलको निर्माण भएको छ ।’
उनी भन्छन्, ‘कुशल व्यवस्थापन र स्वच्छ वातावरणको कारण नै विद्यार्थीको उपयुक्त छनोटमा काठमाडौं वल्र्ड स्कुल पर्दछ ।’ स्कुलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र स्टाफको लागि कुनैपनि सेवा सुविधाहरूको कमी नभएको उनी बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा
नेपालबाट बर्सेनि गुणस्तर शिक्षा प्राप्तिका लागि विद्यार्थीहरू भारत र अन्य देशमा जानुपर्ने बाध्यता छ । नेपालका स्कुलहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिन सकिरहेका छैनन् । यो नेपाली शिक्षा जगत्को प्रमुख समस्या हो । नेपालको यही समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै काठमाडौं वल्र्ड स्कुलको स्थापना गरिएको डा. घिसिङको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘स्कुलमा सबै सेवासुविधाहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका छन् ।’ नेपालमा अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएका स्कुलभन्दा धेरै सेवा सुविधा वल्र्ड स्कुलले प्रदान गरेको उनको विश्वास छ । उनका अनुसार निकै अनुभवी, विषयविज्ञ र गुणस्तरयुक्त शिक्षकहरूद्वारा अध्यापन हुन्छ । शिक्षकको योग्यता र शिक्षणको हिसाबले पनि अरूभन्दा पृथक् रहेको उनको विश्वास छ । स्कुलमा पाँच वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई समेत नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य रहेको उनी बताउँछन् ।
पृथक् कक्षा कोठा
कक्षा कोठाले विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । कक्षाकोठाको आकार, विद्यार्थीको संख्या, अध्ययन पद्धति इत्यादि कुरामा उनीहरूको सिकाइ निर्भर रहने गर्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर काठमाडौं वल्र्ड स्कुलले कक्षा कोठालाई नै अन्तर्राष्ट्रिय तवरले व्यवस्थापन गरेको छ । कोठाका बेञ्चहरू बालमैत्री छन् । शिक्षण पद्धतिका लागि आवश्यक सबै किसिमको सुविधाहरू प्रत्येक कक्षाहरूमा व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थीलाई सहज हुनेगरी सेटिङ गरिएको छ ।
कसरी पढाइन्छ यहाँ ?
हाइस्पिडको इन्टरनेट, प्रोजेक्टर, रिसोर्स रुम, सुरुक्षालाई ध्यानमा राखेर अर्लाम सिस्टम तथा सिसिटिभी जडान गरी आधुनिक कक्षा कोठा बनाइएको छ । विद्यालय प्रशासनका अनुसार एउटा कक्षामा सीमित विद्यार्थीहरू मात्र रहन्छन् । जस्तै एउटा कक्षामा २४ जनामात्र विद्यार्थी हुन्छन् भने प्लस टु लेभलमा ३० जना विद्यार्थी राखिने व्यवस्था छ । विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा बस्दा कुनै किसिमको समस्या आउन नदिन विभिन्न सुविधा तथा प्रविधिहरूको प्रबन्ध गरिएको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ ।
शिक्षणमा अतिरिक्त समय
स्कुलमा अध्ययन गर्ने कमजोर विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन र अरू सोसरह बनाउनका लागि लर्निङ कन्सेप्टको अवधारणा वल्र्ड स्कुलले ल्याएको छ ।
यहाँ सिकाइमा समस्या परेका विद्यार्थीहरूको सानो समूह बनाएर शिक्षकहरूले सिकाइमा सहयोग गर्छन् । केही निश्चित समयसम्म विशेष हेरचाहमा उनीहरूलाई शिक्षकले गाइड गर्ने गर्दछन् । उसो त विद्यालयको सुरुवाती वर्ष देखिनै गाइडेन्स एन्ड काउन्सेलिङको सेवा सञ्चालनमा छ । त्यसैगरी विद्यार्थीको प्रयोगात्मक सिकाइका लागि बेलाबेलामा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र विशेषज्ञहरूलाई ल्याएर अन्तरसंवाद कार्यक्रम पनि विद्यालयले सञ्चालन गर्छ ।
विद्यालय प्रशासनले विद्यार्थीको हितलाई ख्याल गर्दै शिक्षकको समयलाई व्यवस्थापन गरेको छ । शिक्षकलाई धेरै लोड भयो भने शिक्षणमा वाधा आउन सक्छ । त्यसैले यहाँ शिक्षकहरूलाई धेरै लोड पार्ने काम हुँदैन । एउटा शिक्षकको हप्तामा २४ पिरियड हुन्छ । फुर्सदको समयमा उनीहरू अध्ययन र अनुसन्धान गर्छन्, ताकी विद्यार्थीलाई सिकाइमा सहजै सहजीकरण गर्न सकियोस् ।
विद्यार्थीको सुविधाका लागि स्कुल प्रशासनले छात्र र छात्राका लागि बेग्लै छात्रावासको व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो घरको जस्तै वातावरण रहेको छात्रावास भवन स्कुल परिसरसँगै पैदल दुरीमा पर्दछ ।
चमेना गृह कस्तो छ ?
चमेना गृहमा अत्याधुनिक भान्छा (मोडुलर किचेन) को स्थापना गरिएको छ । यहाँ सन्तुलित र स्वस्थकर खाना उपलब्ध हुन्छ । अनुभवी र कुशल सेफको निगरानीमा खाना आपूर्ति गरिन्छ । यहाँ शाकाहारी र मासांहारीका लागि छुट्टै आचारसंहिता लागू गरिएको छ । जसका कारण विद्यालय प्रशासन शाकाहारी र मासांहारी विद्यार्थीको स्वास्थ्य र स्वादमा सम्झौता गर्दैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
स्कुलमा स्वास्थ्योपचार सेवा
यस स्कुलमा दक्ष र आधिकारिक नर्सहरू प्राथमिक उपचारमा संलग्न छन् । स्कुल अवधिमा विद्यार्थीलाई सामान्य चोपटक वा बिरामी भयो भने अस्पतालसरह उपचारसेवा गर्न पर्याप्त शैय्याको व्यवस्था गरिएको छ । यसको अतिरिक्त विद्यालय प्रशासनले अनुभवी चिकित्साकर्मीमार्फत बेलाबेलामा विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य जाँच गराइन्छ । साथै विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना जगाउन स्वास्थ्य शिविरको माध्यमबाट आँखा, दाँतलगायत परीक्षण गराइन्छ ।
किताबी ज्ञानले मात्र अध्ययनको भोक मर्दैन । त्यसैले अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि स्कुलले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । अतिरिक्त क्रियाकलापबाट नै विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धिका साथै प्रतिभा प्रस्फुटन हुन्छ । विद्यार्थीले चाहनाअनुसार विभिन्न खेलहरू खेल्न सक्छन् । डिजाइन टेक्नोलोजी, ड्रामा एन्ड कम्युनिकेसनलाई स्कुलले सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यसैगरी अन्य पुस्तक पढ्नका लागि लाइब्रेरीको व्यवस्थासँगै विद्यार्थीको अनुशासन नै विद्यालयको सौन्दर्य हुने हुनाले माया, प्रेम र प्रेरणाद्वारा उनीहरूलाई अनुशासित बनाउने विद्यालयको प्रतिबद्धता छ ।
स्कुल प्रशासनसँग कसरी सम्पर्क राख्ने वा भर्नासम्बन्धी कसरी सोधपुछ गर्ने ?
इदि तपाईं आफ्ना नानी वा बालबच्चा भर्ना गर्न चाहनु हुन्छ भने विद्यालय प्रशासनको फोन नं. ९७७ १ ५०९०३५५ र ९८६१५९८५७५ मा सीधै सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ । जहाँ तपाईंले न्यानो सम्मान पाउनु हुनेछ । यस्तै विद्यालय प्रशासनसँग तपार्इं इमेल ष्लाय२पधक।भमग।लउ मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तै स्कुलको वेबसाइट धधध।पधक।भमग।लउ मा भ्रमण गरेर विद्यालयसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी हासिल गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईंको विद्यालयबारे विश्वास आर्जन गरेर आफ्ना सन्तानको भविष्य सुन्दर र सुनिश्चित पार्न सकिन्छ ।